गर्भनरले भनेजस्तै लघुवित्तको सेयर मूल्य ३६ सय देखि ४ हजारसम्म छ त ? यस्तो छ वास्तविकता | Ratopati
personरातोपाटी संवाददाताaccess_timeJun 17, 2019 chat_bubble_outline0
सेयर बजार लगातार ओरोलो लागिरहेको छ । महिनाको पहिलो दिन र साताको पनि पहिलो दिन (असार १) ११.३६ अङ्कले घटेको छ । ठूला ठूला चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीको सेयर मूल्य अवमूल्यन भइरहेको बेला कम पुँजीका लघुवित्त कम्पनीमा भने लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ । यसको पुष्टि ती कम्पनीहरूको हाल कायम रहेको सेयर मूल्यले गर्छ ।
लघुवित्त कम्पनीको सेयर मूल्य बढी भएको विषयको उठान नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गर्भनरले समेत एक कार्यक्रममा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले गरिब वर्गहरूलाई ऋण दिने लघुवित्त कम्पनीको सेयरमूल्य किन ८ अर्ब चुक्तापुँजी भएका वाणिज्य बैङ्कको भन्दा बढी हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । यसो हुनुमा चलखेल भएको हुन सक्ने उनको आशङ्का छ ।
‘८ अर्बको चुक्तापुँजी हुने बैङ्कको सेयर मूल्य २, ३ सय छ । लघुवित्तको ३६ सय देखि ४ हजारसम्म छ । कुन हैसियतमा कारोबार भएको छ, यसैमा प्रश्न खडा भएको छ’ । यो गभर्नरले एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति हो ।
गर्भनरले भनेजस्तै लघुवित्तको सेयर मूल्य ३६ सय देखि ४ हजारसम्म छ त ? हामीले लगानीकर्तालाई लघुवित्तको पछिल्लो सेयर मूल्य देखाउँन खोजेका छौँ ।
अहिलेको समयमा लघुवित्तको सङ्ख्या बढी भएकाले स्वतःस्फूर्त मर्जमा जान पनि उनले आग्रह गरेका थिए । बाध्यकारी भएर आफूले कदम चाल्न नपरोस् भन्दै यस्ता कम्पनीलाई खबरदारीसमेत गर्न भ्याए ।
आइतबार (असार १) नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सेयर कारोबार पछिको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य यस्तो छ ।
सबैभन्दा बढी सेयर मूल्य भएको कम्पनी जनउत्थान लघुवित्त रहेको छ । यसको बजार मूल्य प्रतिकित्ता १ हजार ८ सय ४ रुपैयाँ रहेको छ । त्यसपछि नेसनल माइक्रोफाइनान्स छ, जसको सेयर मूल्य १४०४ रुपैयाँ रहेको छ । ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको १ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ प्रतिकित्ता सेयरमूल्य छ । जब कि ग्लोबल आईएमई बैङ्कको प्रतिकित्ता सेयर २९८ रुपैयाँ छ ।
सबैभन्दा बढी सेयर मूल्य भएका लघुवित्त कम्पनी
जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैङ्क ः १८०४ रुपैयाँ
नेसनल माइक्रो फाइनान्स ः १४७८ रुपैयाँ
फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स : १४०४ रुपैयाँ
ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था ः १२६८रुपैयाँ
समता माइक्रो फाइनान्स : १२२५ रुपैयाँ
एनएमबी माइक्रो फाइनान्स ः १००० रुपैयाँ
छिमेक लघुवित्त विकास बैङ्क : ९३९ रुपैयाँ
माहुली सामुदायिक लघुवित्त ः ९०० रुपैयाँ
निर्धन उत्थान लघुवित्त ः ८४० रुपैयाँ
स्वावलमबन लघुवित्त ः ८८० रुपैयाँ
डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था ः ७०७ रुपैयाँ
सूर्योदय लघुवित्त ः ७३५ रुपैयाँ
७ सयभन्दा कम मूल्यका सेयर भएका लघुवित्त
आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था ः ४१६ रुपैयाँ
सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था ः ५७० रुपैयाँ
फस्र्ट माइक्रो फाइनान्स ः ३८६ रुपैयाँ
ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था: ३५८ रुपैयाँ
लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था ः ६९३ रुपैयाँ
महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स : ४५७ रुपैयाँ
मेरो माइक्रोफाइनान्स ः ५६५ रुपैयाँ
मिथिला लघुवित्त ः ४४२ रुपैयाँ
नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था ः ४४० रुपैयाँ
नयाँ नेपाल लघुवित्त ः ३८७ रुपैयाँ
नेपाल एग्रो लघुवित्त : ३२६ रुपैयाँ
नेपाल सेभ लघुवित्त ः ४०० रुपैयाँ
नेरुडे लघुवित्त विकास बैङ्क ः ४९५ रुपैयाँ
आरएमडीसी लघुवित्त ः ६४८ रुपैयाँ
आरएसडीसी लघुवित्त ः ३७० रुपैयाँ
सामुदायिक लघुवित्त ः ५४८ रुपैयाँ
स्पर्श लघुवित्त ः ५०५ रुपैयाँ
समिट लघुवित्त : ५४० रुपैयाँ
सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स : ४१८ रुपैयाँ
स्वदेशी लघुवित्त ः ५६० रुपैयाँ
स्वरोजगार लघुवित्त ः ४३२ रुपैयाँ
उन्नती माइक्रो फाइनान्स ः ८२१ रुपैयाँ
विजय लघुवित्त ः ५१५ रुपैयाँ ।